दोश्रो बि’हे गर्दै भा*इरल अर्जुन बिक, पहिलो श्रीम’तीलाई के भने ? कमाइ कति हुन्छ अहिले ? Arjun Bk | Public 24Khabar
Home News दोश्रो बि’हे गर्दै भा*इरल अर्जुन बिक, पहिलो श्रीम’तीलाई के भने ? कमाइ...
दोश्रो बि’हे गर्दै भा*इरल अर्जुन बिक, पहिलो श्रीम’तीलाई के भने ? कमाइ कति हुन्छ अहिले ? Arjun Bk
दोश्रो बिहे गर्दै भा*इरल अर्जुन बिक, पहिलो श्रीम’तीलाई के भने ? कमाइ कति हुन्छ अहिले ? Arjun Bk
कश्यपले लैंगिक एवं यौनिक अल्पसंख्यकहरूको हकमा लैंगिकताका आधारमा पूर्वीय समाज प्रगतिशील भएको र यौनिकताका हिसाबमा पश्चिमा समाज अगाडि भएको तर्क राखे । ‘नीतिगत र संस्कृति हिसाबमा पूर्वीय समाज तृतीय प्रकृतिका मानिसका लागि केही उदार छ’, कश्यपले भने । भलै धर्मग्रन्थका केही अंश, सामाजिक संरचनाले भने मानिसलाई लैंगिक र यौनिक अल्पसंख्यकबारे सोच सीमित घेरामा बाँधिदिएको उनले बताए । ‘जैन, बौद्ध र हिन्दु धर्ममा लाग्नेहरूका लागि यी विषय क्लिष्ट छ । किनकि त्यहाँ यौन र यौनिकता काम र वासनासँग जोडिएका विषय हुन् भनिएको छ । तिनलाई त्यागेपछि मात्र मानिसले मुक्ति पाउने जनाइएको छ । कामना र इच्छाहरू बाँकी रहेसम्म बाँधिइरहन्छौं भनिएको छ,’ उनले भने ।
बौद्ध धर्मका भिक्षु, भिक्षुणी एवम् अनुयायीहरूले पालना गर्नुपर्ने पञ्चशीललाई उदाहरणका रुपमा उनले प्रस्तुत गरे । जहाँ ‘उभयव्यञ्जक’ (महिला पुरुष दुवैको लैंगिक अंग भएको मानिस) र ‘पाण्डक’ (कुनै अंग नभएको)लाई संगठनमा समावेश नगर्नु भन्ने छ । ‘यी धेरै पछि आएका कुरा हुन् । बुद्धले त मुक्तिको मार्गमा लाग्ने सबै मानवमा चेतना हुन्छ भेदभाव गर्नुहुँदैन भनेका छन् । अपांगता भएकाहरूलाई नि समावेश नगर्नु भनिएको शील पछि लेखिएका हुन्, जसमा मलाई विश्वास छैन,’ उनले भने ।
समाजमा लैंगिकता र यौनिकताका विषयलाई लिएर अज्ञानता स्थापित हुनुमा धर्मशास्त्रको योगदान रहेको उनको तर्क हो । प्राय: धर्मले महिला वा समलिंगी हुनु पूर्वजन्ममा यौन सम्बन्धमा अनैतिक हुनुको फलका रुपमा व्याख्या गर्नुलाई समस्याका रुपमा उनले प्रस्तुत गरे । ‘यी मिथ्या विचार हुन् । जुन समस्या पितृसत्तात्मक धार्मिक संघहरू संगठित भएका हरेक समाजलमा छन् । यी भ्रम नचिरेसम्म समाजमा उस्तै विचार स्थापित रहन्छ,’ उनले भने ।
Previous articleआमा गाउदा गाउदै बेहोस भइन छोरीको बिजोग, आमाछोरीको आजसम्मकै कारुणिक दोहोरी Riya Khadka Rati Khadka
Next articleभखरै भारतले दियो नेपाल लाई क*डा चेता*वनी चिन को ईसाराम चलेको